रुकुम घटनाले लियो नया रुप , नबराज र सुष्माको कल रेकर्डको बास्तबिकता के हो ? दिदीले रुदै यसो भनिन (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
आफ्नो परिवारले अर्कै केटासँग विवाह गराउन लागेको तर आफूले स्वीकार नगरेको बताउँदै आफूलाई लिन साथीहरूसहित आउन आग्रह गरिन् । नवराजले १९ जना साथीहरूलाई साताअघि नै छिट्टै प्रेमिकालाई भगाएर ल्याउने योजना बनाएको भन्दै सघाउन सहयोग मागेका थिए । तर पछिल्लो म्यासेज आएपछि उनीसँग कुर्ने धैर्य भएन ।रुकुमपश्चिमको यो घटनाले फेरी अर्को मोड लिएको छ । भर्खरै केहि मिडियामा उनीहरु बीचको फोन सम्पर्क भएको रेकर्ड बाहिर आएको छ । यसको बास्तबिकता के हो ? कल रेकर्डमा के छ ? हेर्नुस तलको भिडियोमा सबै कुरा प्रस्तुत गरिको छ ।
55 सेकेन्ड अगाडि